Ogaden News Agency (ONA) – Dhaxal Weeye Xornimee u Dhigo Abaal – Riwaayad ay dhigeen kooxda Horseed ee jaaliyadda Yemen (Daawo)
Dhaxal Weeye Xornimee u Dhigo Abaal – Riwaayad ay dhigeen kooxda Horseed ee jaaliyadda Yemen (Daawo)
Waxay jaaliyada S.Ogaadeeniya ee dalka Yemen gaar ahaan caasimadda Sanca lagu daawaday riwaayad aad u xiisa badan oo lamacag baxday; Dhaxal Weeye Xornimee u Dhigo Abaal. Riwaayadan oy soo qaban-qaabiyeen hoboladda jaaliyadda ayaan horay uga dhicin munaasabad la mid ah dalka Yemen, waxayna ahayd mid aan loo kala hadhin oy ka soo qayb galeen dhamaan bulshada S.Ogadenia qaybaheeda kala duwan iyo bulshawaynta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen wixii fursad u helay inay daawadaan riwaayadda.
Riwaayadda oy soo diyaariyeen kooxda Horseed ee jaaliyadda S.Ogadenia dalka Yemen ayaa ahayd riwaayad muujisay wacdaro oy ku dhanaayeen xikmad, majaajilo, heeso iyo geeraaro.
Jaaliyadda Yemen ayaaqaadatay dhowr jeer oo hore bandhig faneed ay soo abaabuleen haya’da Qaxootiga iyo Wasaarada Bulshada ee dalka Yemen, waxayna noqdeen jaaliyadda 1aad ee karti u yeelatay inay is-abaabulaan dhan walba.
A Razzak says:
ANI OO AH OYSU K.S.A OO KU JIRA MAMULKA JALIYADA MAGALADA DAMAAM WAXAN AAD UGU MAHAD CELINAYAA JALIYADA YEMEN GAR AHAN MAGALADA SANCA RIWAYADA AYE SO BANDHIGEN WAXAYNA MUJINISA ABABULKA IYO IS XILQANKA JALIDADA WADANKAAS IYO DUROFAHA AYE KU NOLYHIIN
ABWAAN SAXARDIID IYO MUDANE SAXANE (( HABANE )) IYO MUDANE GAXNOOG AAD BAAN OO SALAMAYAA WAXANA IDIIN LEYAHAY GULESTA WALAYAAL AFKEGA IYO AFKA OYSU SACUDI CARABIA URUUR HOOSAD IYO GOLE DHEXE IYO GOLE SARE WAALIDA WADA SALAMAYAA
HOGANKA W F OYSU KSA ..
Abdul razaak (( gurmad ))..